Ganacsatada Soomaalida ah ee reer Gaarisa oo dhibaata ku qaba sawirada murashixiinta doorashada. | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Friday, May 24th, 2013	Home
Ganacsatada Soomaalida ah ee reer Gaarisa oo dhibaata ku qaba sawirada murashixiinta doorashada.
Published on March 1, 2013 by muqdisho abdifatah · No Comments
Number of View :1134Soomaalida, gaar ahaan ganacsatada ku nool magaalada Gaarisa ee gobalka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay cabasho tii ugu darneyd ka muujinayaan sawirada murashixiinta u taagan xilalka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka dalka Kenya.
Waxa ay sheegeen ganacsatadaani in albaabada goobahooda ganacsi habeenkii lagu dhejiyo sawirada murashixiinta, iyada oo shacabka iyaga ka dukaameestana ay ka go’antahay in aysan wax ka iibsan dukaan uu irida uga dheganyahay sawir ruux iyagu aysan taageersaneyn.
Ganacsatadaani qaarkood ayaa waxa ay ku hadleen in habeenkii marka ay seedxaan dadka ololaha u wada murashixiinta ay ku dhejinayaan albaabada ganacsiga ah sawiradda iyada oo subaxdii la’arkayo albaabkii oo ay qariyeen sawiro badan, arintas oo ah mid ganacsigooda aan u habooneyn.
Arintaan ayaa waxa ay imaaneysaa iyada oo wajigii ugu danbeeyay ee doorashada dalka Kenya lagu jiro, qolyaha ololaha wadaahina ay doonayaan in ay soo jiitaan taagerayaal fara badan oo u codeeya hadba ruuxa ay iyagu lajiraan.